Mgbe ị na-eji igwe na-emepụta ihe maka imepụta ihe, a ghaghị ị processa ntị na slitting usoro a ga-etinye anya na ya.
Mgbe ị na-eji igwe na-emepụta ihe maka imepụta ihe, a ghaghị ị processa ntị na slitting usoro a ga-etinye anya na ya. Ya mere, edemede a ga - ejikọ ihe nkiri BOPP / LDPE nke mejupụtara, ihe nsogbu dị iche iche na - eme na slitting production process and pr ...
N'ime usoro ịme akpa, mgbe ụfọdụ akpa akara adịghị mma. Ngwaahịa mepụtara n'ụzọ dị otu a erughị eru. Gịnị na-akpata ihe ịtụnanya a? Anyị kwesịrị ị paya ntị na okpomọkụ cutter okpomọkụ Ọ bụ mbubata ịchịkwa cutter okpomọkụ n'oge akpa Ndinam, ma ọ bụrụ na okpomọkụ ọ dịghị ...
Gịnị mere akpa ogologo dị iche n'oge eji eme akpa?
N'ime usoro ịme akpa, mgbe ụfọdụ, ogologo nke akpa plastic dị iche dị iche. Ngwaahịa mepụtara n'ụzọ dị otu a erughị eru. Gịnị na-akpata ihe ịtụnanya a? Anyị kwesịrị ị paya ntị na ọrụ dị mkpa nke igwe na-eme akpa site na akụkụ ndị a iji gbochie ụdị a ...